Wararka - Maxaad ugu baahan tahay sawir-qaadis?
Ereyga 'photovoltaics' (PV) waxaa markii ugu horreysay la sheegay qiyaastii 1890, wuxuuna ka yimid ereyada Griigga: sawir, 'phos,' oo macnaheedu yahay iftiin, iyo 'volt,' oo loola jeedo koronto. Photovoltaic, sidaa darteed, macnaheedu waa iftiin-koronto, oo sifeynaya si sax ah habka qalabka iyo aaladaha sawir-qaadista u shaqeeyaan. Photovoltaics waa hab si toos ah iftiinka loogu rogo koronto. Tusaalaha caanka ah ee sawir-qaadista waa xisaabiyeyaasha ku shaqeeya cadceedda, kuwaas oo adeegsada unug yar oo sawir-qaade ah si ay u xoojiyaan kalkuleytarka.
In kasta oo mararka qaar qolladaha sawir-qaadaha lagu wareero nidaamyada kululaynta biyaha qorraxda, kuwaas oo ah boodhadh loo adeegsado in lagu kululeeyo biyaha, sawir-qaadeyaasha (ama qorraxda PV) waxay u shaqeeyaan si ka duwan sidii hore waxaana loo isticmaalaa in lagu soo saaro koronto, ma aha kuleyl. Intaas waxaa sii dheer, waxaa badanaa loogu yeeraa baararka qoraxda.
Intaa waxaa dheer, ka soo horjeedka fikirka guud, Solar PV's daruuri uma ahan inay u isticmaalaan qoraxda tooska ah si ay u shaqeeyaan, iftiinka qaar ayaa ku filan nidaamka inuu shaqeeyo. Sidaa darteed, maalgashiga sawir-qaadashada waxay xaqiijineysaa korantada dhismayaasha maahan oo keliya inta lagu jiro maalmaha xagaaga dheer iyo qoraxdu laakiin sidoo kale maalmaha daruuraha sida bilaha jiilaalka. Waa run inkasta oo, in waxtarka guluubyadu si toos ah ugu xidhan yihiin xaddiga iftiinka ay helayaan, markaa qorraxda oo sii xoogaysata, ayaa ka sii wanaagsan.
Maxay yihiin Faa'iidooyinka Photovoltaics?
Sida la wada ogyahay, tamarta qorraxdu waa nadiif ah oo aan dhammaad lahayn. Photovoltaics waxay si fiican u isticmaalaan tamarta qorraxda waxayna u badalaan koronto loo isticmaali karo in qoysaska laga dhigo kuwo cagaaran oo aan ku xirnayn shabakada. Ka soo horjeedda aaminaadda caanka ah ee taageerta in baallayaasha qorraxda ay qaali yihiin, waa inaad ku faraxsan tahay inaad ogaato in baallayaasha qorraxda ay dhab ahaan kuu badbaadin karaan lacag! Waxaa jira deeqo kaladuwan oo kaa bixin doonta tamarta nadiifka ah ee aad soo saarto, sidaa darteed sameynta tamarta qorraxda a maalgashi caqli badan. Ku darista baalayaasha cadceedda ayaa aakhirka ku siin doona oo keliya deegaan ahaan laakiin sidoo kale faa'iidooyin dhaqaale.
Tani waxoogaa ma wareersan tahay? Hoos ka akhri si aad u fahamto sida tikniyoolajiyaddu u shaqeyso iyo ikhtiyaarrada suuqa laga heli karo.
Sidee Photovoltaics u shaqeeyaan?
Sida sawir qaade waxaa loola jeedaa nalka tooska loogu beddelayo korantada, tikniyoolajiyadda sawir qaadeyaasha waxay isticmaashaa walxo leh saameyn sawir leh si loo soo saaro awood. Kuwaas waxaa loo yaqaan semiconductors. Semiconductor-ka ugu caansan waa silikoon, kaasoo sawir-qaadaha ka soo qaata iftiinka sidaas darteedna wuxuu elektronka ka siidaayaa atamka.
Iftiinka (mid dabiici ah ama mid dabiici ah) oo gaara unugga sawir qaadeyaasha wuxuu abuuraa dhul koronto ah oo ka kooban lakabyada maaddada. Elektaroonadaas bilaashka ah kadib waa laqabsan karaa, taas oo dhalisay tamar koronto oo loo isticmaali karo soo saarida koronto. Iftiinka badan ee nuugaya, ayaa koronto badan oo ay soo saari doonto sawir-qaadayaasha. Qalabka qoraxda ee adeegsanaya sawir-qaadeyaasha waxay soo saaraan mid toos ah (DC), kaas oo loo beddelayo mid kale (AC) si looga dhigo korantada loo isticmaali karo qalabka guryaha. Haddii korantada la soo saaray aan la isticmaalin, dib ayaa loogu rogi karaa DC, oo dib loogu celin karaa shabakadda.
Waa maxay Cellvoltaic Cell iyo Module PV?
Unugyada qorraxda ee loogu talagalay 'photovoltaics' waxaa laga sameeyaa qalabka semiconductor, guud ahaan silikoon. Markuu iftiinku gaadho qolka qorraxda, kaas oo leh dhul koronto oo leh dhinac togan iyo mid taban labadaba, elektaroonnada ayaa laga siidaayaa atomyada. Waxaa lagu qabtay gudaha korantada hadda jirta ee unugga sawir qaade, koronto ayaa la soo saaray.
Haddii dhowr unug oo qorraxda ka mid ah ay koronto ku wada xiriiraan qaab dhismeed taageeraya, dadku waxay ka hadlaan moodeelka loo yaqaan 'photovoltaic module', oo loogu talagalay in lagu soo saaro koronto danab gaar ah. Isku-darka qaybo badan oo sawir-qaade ah (ama looxyo) waxaa loo yaqaan 'photovoltaic system', oo si fudud loogu rakibi karo dusha saqafka hore ee dhismaha si loogu helo koronto.
Waa Maxay Noocyada Module PV-ga ah?
Hal shuruud oo fudud oo loo adeegsan karo in lagu kala saaro Module-ka PV waa in ay ku xiran yihiin iyo in kale. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo waxaan u kala saari karnaa qaybaha:
Nidaamyada Off-Grid: kuwani waa nidaamyo aan ku xirneyn shabakada, guud ahaanna waxaa loo isticmaalaa in lagu daboolo baahida korantada ee dhismayaasha fogfog ama guryaha fasaxa ah ee aan marin u lahayn shabakada dadweynaha. Xayndaabyadan ayaa ah ikhtiyaar ku habboon maadaama aysan u baahnayn rukhsad gaar ah shirkadaha qaybiya korantada. Si kastaba ha noqotee, maaddaama ay yihiin 100% madax-bannaan, nidaamyada ka baxsan shabakadda guud ahaan waxay u baahan yihiin koronto-dhaliye ama bateriyaal dheeraad ah si ay u yeeshaan koronto marka qorraxdu aysan iftiimin. Sida kharashka nidaamka keydinta batteriga qoraxda ayaa muujinaya hoos u dhac, ikhtiyaarka nidaamyada keydinta batteriga qorraxda ayaa ah mid la heli karo oo la awoodi karo qoysas badan.
Nidaamyada ku xiran Shabakadda: kuwani waa nidaamyo kuxiran shabakada, taas oo micnaheedu yahay waxaad ka isticmaali kartaa korontada shirkada korontada markii aad u baahato. Markaad sameyn weydo, waxaad u isticmaali kartaa korontada ay soo saaraan darbiyadaada adeegsigaaga shakhsi ahaaneed, waxaad kaloo dooran kartaa inaad iibiso dhammaan, ama wixii ka badan, dib ugu noqo shabakadda. Nidaamyada shabakadda ku xiran ma lahan wax awood ah oo ay ku keydin karaan batteriga.
Ka waran Nolosha iyo Dayactirka Module Sawir qaade ah?
Mid ka mid ah dhinacyada aadka u wanaagsan ee maalgashiga sawir-qaadashada ayaa ah in badeecaddu ay leedahay cimri dheer. Tirada saxda ah waxay kuxirantahay doorsoomayaasha kaladuwan sida tayada golaha iyo xaaladaha cimilada, laakiin guud ahaan, waxay socon doonaan in kabadan 40 sano. Intaa waxaa dheer, nidaamyada qorraxda waxay u baahan yihiin dayactir aad u yar waxayna ku yimaadaan, guud ahaan, iyagoo leh dammaanad waxqabad 25-sano ah.
Si kastaba ha noqotee, rogayaasha qoraxda ee PV, kuwaas oo ah kuwa mas'uulka ka ah beddelidda qoraxda DC ee korontada korontada ku shaqeeya, waxay u baahan karaan in la beddelo 12 illaa 15 sano ka dib oo badiyaa waxay la yimaadaan dammaanad 5 sano ah.
Waa Maxay Canshuurta-Quudinta?
Kani wuxuu ahaa qorshe Dowladda UK loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo dadka inay isticmaalaan ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Haddii aad ku rakibtay tiknoolajiyad koronto dhalisa il la cusboonaysiin karo ama kaarboon-yar, oo aad fulisay shuruudo gaar ah, waxaad lacag ka heli kartaa shirkadda tamarta kaa iibisa.
Qorshahan dowladdu wuxuu yimid dhammaadkii Abriil 2019, in kastoo. Qiimaha tikniyoolajiyadda dib loo cusboonaysiin karo ee ku hoos dhacay qorshaha ayaa noqday mid la awoodi karo waqti ka dib, sidaa darteedna dowladda ayaan mar dambe u arkin inay lagama maarmaan tahay in la kabo tiknoolajiyada.
Waa maxay Shahaadada Waxqabadka Tamarta (EPC)?
Kani waa caddeyn ay tahay inay leeyihiin dhammaan dhismooyinka gudaha iyo ganacsiga ee laga heli karo inay ka iibsadaan ama ka kiraystaan ​​Boqortooyada Midowday. Sahanka waxqabadka tamarta wuxuu kaa caawin karaa inaad aqoonsato siyaabo lacag loogu kaydin karo biilashaada tamarta adoo aqoonsanaya qodobada aad tamarta ku lumineyso. EPC ayaa kuu sheegi doonta sida ugufiican ee dhismahaagu u yahay, iyada oo ku qiimeynaysa A (aad waxtar u leh) ilaa G (waxtar la'aan). Markii la abuuro, EPC waxay shaqeyneysaa toban sano.
Sida tiknoolajiyad kasta, sawir-qaadeyaasha ayaa ku jira horumar joogto ah iyadoo diiradda ugu weyn la saarayo iyaga oo ka dhigaya kuwo wax ku ool ah - labadaba marka la eego waxtarka unugyada iyo qiimaha-waxtarka leh ee isticmaalaha ugu dambeeya. Shirkado kala duwan ayaa ka shaqeynaya hagaajinta waxtarka leh ee loo yaqaan 'photovoltaics' si loo kordhiyo waxqabadka unugyada qorraxda laakiin tobankii sano ee la soo dhaafay, horumarinta waxtarka ayaa aad u gaabis ah.
Si kastaba ha noqotee, tani waxay u noqon kartaa dhinac wanaagsan milkiilayaasha sawir-qaadaha sidoo kale, sababtoo ah kuwa hadda qorsheynaya inay maal-gashadaan nidaamka sawir-qaadista. Maaddaama aysan jirin kor u kac lama filaan ah oo ku saabsan waxtarka sawir-qaadeyaasha la filayo, uma badna in horumarin cusub ay ka duugi doonto sawir-gacmeedka hadda laga heli karo suuqa ganacsiga.
Waqtiga boostada: Jun-25-2020